Mogadishu Journal » Saxafi ku xiran magaalada Kismaayo
Mjournal :-Magaalada Kismaayo waxaa maalintii labaad ku xiran saxafi ay shaley xireen ciidamada amniga ee maamulka Jubbaland.
Saxafigan oo latgu magacaaco Saabir Cabdulqaadir Warsame, ayaa la xiray xilli uu waday shaqo uu ku duubayay sida la sheegay munaasabad lagu xusayay sanad-guurada 1-aad ee markii uu madaxweyne Farmaajo xilka qabtay.
Ehelka saxafigan ayaa sheegay inaysan jirin wax dhib ah oo uu weriyahan geystay. Ururka suxufiyiinta Soomaalida ee NUSOJ ayaa ku baaqay in la sii daayo suxufigan.
Madaxweyne Caan oo dacwad lagu soo oogayo